मतान्तर बढाउँदै देउवा : १७०० मतगणना हुँदा देउवालाई ९९२ मत - Naya Pageमतान्तर बढाउँदै देउवा : १७०० मतगणना हुँदा देउवालाई ९९२ मत - Naya Page
मतान्तर बढाउँदै देउवा : १७०० मतगणना हुँदा देउवालाई ९९२ मत
२९ मंसिर २०७८, बुधबार
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदको जारी मतगणनामा शेरबहादुर देउवाले अग्रता कायम राखेका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा जारी मतगणनामा उनले अग्रतासँगै मतान्तर पनि बढाउँदै गएका छन् ।
१७०० मतगणना हुँदा देउवाको पक्षमा ९९२ मत खसेको छ । उनका प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइरालाका पक्षमा ६८९ मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा सभापतिका कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि मंगलबार पुन : मतदान भएको हो । पहिलो चरणमा कांग्रेसको सभापतिका लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा थिए ।
पहिलो चरणमा देउवाले २२५८ मत पाएका थिए भने शेखरले १७०२ मत पाएका थिए । प्रकाशमान सिंहले ३७१ मत पाउँदा विमलेन्द्र निधिले २५० र कल्याण गुरुङले २२ मत पाए ।
दोस्रो चरणमा देउवालाई ३७१ मत ल्याएका सिंह, २४९ मत ल्याएका निधि र केबल २० मत ल्याएका गुरुङले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा साथ दिएका छन् ।
दोस्रो चरणमा दिउँसो साढे ३ बजेपछि ६ घण्टाको अवधिमा ४ हजार ५६२ जनाले मतदान गरेका छन् । यो पहिलो चरणमा भन्दा ११७ मत कम हो । कुल ४७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४ हजार ६६९ जनाले पहिलो चरणमा मतदान गरेका थिए ।
स्वस्थानी व्रत आजदेखि सुरू : व्रत बस्दा के पाइन्छ ?
समुदायस्तरमै खोप व्यवस्था गरिँदै
बागमती प्रदेश : कोभिड-१९ व्यवस्थापन समिति गठन, स्वास्थ्यका ४७९ कर्मचारीको म्याद थप